सैनामैना शहर : कहिले पूरा होला चक्रपथमा हिंड्ने जनताको रहर ! – Dainik Lumbini
सैनामैना शहर : कहिले पूरा होला चक्रपथमा हिंड्ने जनताको रहर !
सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर ७ का स्थानीय ७७ वर्षीय टामलाल घिमिरे सैनामैनाको चक्रपथमा पर्ने देवापारको आफ्नै घरको छतमा विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकी बुहारीसंग रिङरोडको बाटो हेर्दै गफिदै भन्छन् – ‘रिङरोड बनेपछि त हामीलाई धेरै सहज हुने होला नी ! विगत तीन वर्षदेखि कुरीराखेका छौं, आशा छ अर्को वर्षसम्म त कसो पूरा नहोला !’
प्रतिउत्तरमा बुहारी गीता घिमिरेले मात्र यत्ति भनिन् – खै बुवा अर्को वर्षसम्म त पूरा होला नि ।’ यी घिमिरेहरु मात्र होइन धेरै सैनामैनाका स्थानीयहरु चक्रपथको काम समयमै सम्पन्न भएको खण्डमा नगरले नै मुहार फेर्नेमा आशावादी छन् । तर कोरोना कहर तथा प्राविधिक कारणले रिङरोड (सैनामैना चक्रपथ)को काम समयमा सम्पन्न भइरहेको छैन ।
सैनामैनाका १ देखि ११ सम्मका सबै वडाका साथै बुटवल तथा लुम्बिनीलाई सहायक मार्गबाट पनि जोड्ने गरी मुलुककै लामो ५५ किमिको चक्रपथ बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा निर्माण भइरहेको छ ।
पहिलो चरणमामा अहिले ४० किलोमिटरको काम भइरहेको छ । तर ०७३÷०७४ मा ठेक्का भएको चक्रपथको काम हालसम्म जम्मा ४९ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।
आयोजना प्रमुख उद्धब भट्टराई यसै वर्ष पुरा हुनुपर्ने काम सम्पन्न हुन नसक्दा डेढ वर्ष म्याद थपिएको बताउँछन् । उनका अनुसार उत्तरतर्फको पिच गर्ने काम यसै वर्ष हुनेछ भने दक्षीणतर्फ ग्राभेलको काम पनि सकिने छ । उनी अर्को वर्ष भने बाँकी पिचको काम सम्पन्न हुनेमा ढुक्क छन् । सैनामैनाकै शानका रुपमा रहेको चक्रपथलाई लिएर नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्की यसलाई ड्रीम प्रोजेक्टको संज्ञा दिन्छन् । यो मेरो दिलको योजना हो,’ कार्की थप्छन् – ‘थोरै ढिला भए पनि यो सम्पन्न भइसकेपछि सैनामैनालाई अझै छुट्टै हिसाबले चिनाउनेमा आशावादी छु । काम ढिलो होस् तर कडा होस्, ।
‘मेयर कार्कीले अगाडि थपे –‘यो योजनाप्रती म अत्यन्त गम्भीर पनि छु । कोरोना कहर र केही प्राविधिक कारणले मात्र ढिला भएको हो । ढुक्क हुनुहोस् म नगरका आम जनतालाई आशास्त पार्दछु कि अर्को वर्ष चक्रपथको काम पूरा हुनेछ ।’
कुल ४० करोडको बजेटमा निर्माण हुन लागेको चक्रपथको निर्माण सुरु गर्ने सैनामैना नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह समेत हो ।
सैनामैनामा एक सय शैयाको आइसाेलेटेड अस्पताल तयार
रोटरीले दियो एक करोड १८ लाखको स्वास्थ्य उपकरण
कोरोना भाईरस संक्रमणको जोखिममा कैदीबन्दी